शिक्षकद्वारा १४ वर्षीया विद्यार्थी ब’ लात्का’ र
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/शिक्षकद्वारा १४ वर्षीया विद्यार्थी ब’ लात्का’ र
सल्यानकाे बागचाैरमा एक महिना अघि शिक्षकबाट ब ला त्कृत भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएकी १४ वर्षीया बालिका (जन्मदर्ताका आधारमा) सपना (परिवर्तित नाम) अहिले सम्पर्क बिहिन भएकी छन् ।
गएकाे साउन ८ गते सपनाले आफ्नै शिक्षकले आफुलाइ बला’त्कार गरेकाे भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
सपनाले आफुमाथी ब ला’त्कार भएकाे प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि साउन १० गते सपनाकाे घरमा पुगेर लेकाली अनलाइनले प्रत्यक्ष कुराकानी गरेकाे थियाे ।
करिब आधा घण्टाकाे कुराकानीमा सपनाले घटनाकाे बारेमा सबै बताएकी छन् ।कसरी भएकाे थियाे घटना? पी’डित सपना (परिवर्तित नाम) बागचाैर नगरपालिका २ निवासी हुन् भने शिक्षक रामचन्द्र केसी पनि साेहि वडा बासी हुन् ।
केसीले बागचाैरमै ब्राइट रोजल्याण्ड बोर्डिङ स्कुल संचालन गरिरहेका थिए र उनि बाेर्डिङका एमडी हुन् भने सपनाले साेहि स्कुलमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्थिन् ।
सपनाकाे पहिले अर्का एक केटासँग प्रेम थियाे । त्याे प्रेम घर परिवारले थाहा पाएपछि पछि उक्त केटा सँगकाे प्रेम वि’छेद भयाे । सपनाका बुबा बिदेशमा थिए ।
छाेरीकाे अर्का केटा सँग प्रेम भएकाे उनले थाहा पाएपछि रामचन्द्रलाइ आफ्नी छाेरीलाइ सम्झाइदिन र राम्राे सँग पढाइदिन उनले आग्रह गरेका थिए ।
याै न प्रस्तावकाे सुरु कहाँबाट भयाे? २०७६ मंसिरमा विद्यालयबाट शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थी किबी खेतिकाे अवलाेकन गर्ने गाडी रिजर्भ गरेर राेल्पा गए ।
राेल्पाबाट फर्किने बेला अध्याराे भैसकेकाे थियाे । गाडीमा शिक्षक केसी अगाडीकाे क्याविन सिट छाेडेर बिचकाे सिटमा बसेकी सपनाकाे सिटमा आएर बसे ।सपना सँग बसेपछि उनले गाडीकाे बत्ति समेत बन्द गरे ।
त्यसपछि सपनाकाे श’रिरमा हात लिएर छुन थाले । सपनाले असहज मान्दै शिक्षकलाइ ह ल्ला गरिदिन्छु थालेपछि उनिले केहि गरेनन् ।
त्यसपछि २०७६ पुस २४ गते श्रीनगरमा प्यवसन सल्यानकाे वार्षिकत्वस कार्यक्रम थियाे।
कार्यक्रममा सबै विद्यार्थीहरुलाइ लिनकाे लागि ब्राइट रोजल्याण्ड बोर्डिङ स्कुलले एउटा गाडी रिजर्भ गर्याे । कार्यक्रममा सपनाले नृत्य पनि देखाउने तालिका थियाे ।
गाडीमा सबै शिक्षक, शिक्षिका र विद्यार्थीहरु गए तर रामचन्द्र केसीले सपनालाइ आफुले बाइकमा लिने भन्दै गाडीमा जान दिएनन् । गाडी अगाडी गयाे ।
सपना र रामचन्द्र पछाडी बाइकमा गए ।सपना भन्छिन्, ‘बाइकमा सर र म सँगै गयाैं । बाटाेमा सरले एउटा हातले हेन्डिल समाउनु हुन्थ्याे, अर्काे हातले पछाडी मेराे घुँडा समाउनु हुन्थ्याे ।
मैले सर यस्ताे किन गर्नुहुन्छ भनेर साेध्दा उहाँले बाइक यसरी नै चलाउछन् भनेर जवाफ दिनुभयाे । अनि मैले पनि यस्तै हाेला त भनेर केहि भनिन् ।
श्रीनगरमा पुगेपछि सपनाले कार्यक्रममा नृत्य पनि देखाइन् । साँझ कार्यक्रम सकिएपछि रामचन्द्रले रिजर्भ गरेकाे गाडीलाइ
अगाडी जान भने तर आफ्नाे बाइक बि ग्रिएकाे भन्दै मर्मत गर्न तिर लागे । बाइक मर्मत गर्दा र अन्य व्यक्तिहरु सँग गफगाफ गर्दा गर्दै श्रीनगरबाट साँझ ७ बजे सपना र रामचन्द्र बागचाैर तर्फ हिडे ।
त्यतिकैमा उता रिजर्भ गाडीमा हुनुभएकाे सरहरुले रामचन्द्र सरलाइ किन ढिला गरेकाे भन्दै फाेन गर्नु भयाे । जवाफमा रामचन्द्र सरले मेराे बाटाेमा बाइक बि ग्रेकाे छ भन्नु भयाे ।
त्यसाेभए हामी गाडी लिएर आम भन्दै सरहरुले प्रश्न गर्नुभयाे । पर्दैन एकैछिनमा बाइक बन्छ । हामी आइहाल्छाैं, तपाइहरु जाँदै गर्नुहाेस भनेर रामचन्द्र सरले जवाफ दिनु भयाे ।
’चाख्लिघाटकाे जंगलमा सपनाले बाइकबाटै ओर्लिन नमानेपछि रामचन्द्र त्यहाँ धेरै क’रकाप नगरेर अगाडी बढे । कालाखेत र थारमारेकाे बीचमा पर्ने स्याउली बजार नजिकैकाे जंगलमा
आइसकेपछि फेरि रामचन्द्रले बाइक राेकेर जंगलमा जाउँ भन्दै सपनालाइ ब’लजफ्ती गर्न थाले । त्यहाँ पनि सपनाले नमानेपछि उनिहरु बागचाैर पुगेर आ-आफ्नाे घर तिर गए ।
‘म माथी त्यस्ताे कार्य गरेपछि म राे’ए । सरले याे कुरा बाहिर भनेपछि तिम्राे नै बे’इज्जत हुन्छ भन्नुभयाे । मैले पनि त्यहि ठानेर कसैलाइ पनि भनिन् ।
याे घट’ना घटेकाे केहिदिन पछि बिहान एक्कासी सपनालाइ रामचन्द्रले स्कुलमा ट्युसन छ पढ्न आउनुपर्याे भन्दै फाेन गरे ।
सपना भन्छिन्, ‘सरले फाेन गरिसकेपछि म पढ्न भन्दै स्कुल गए, तर त्यहाँ काेहि पनि रहेन्छन् ।अनि भित्र अफिसमा जाँदा रामचन्द्र सर मात्रै एक्लै हुनुहुदाे रहेछन् ।
म भित्र जान बित्तिकै सरले अफिसकाे ढाेका बन्द गर्नु भयाे । किन यस्ताे गर्नुहुन्छ सर भन्दै म ठुलाे स्वरमा बाेल्न थाल्दा सरले ठुलाे स्वरमा नबाेल भनेर ह’प्काउन थाल्नुभयाे । त्यसपछि मलाइ ज’वरजस्ती गर्नुभयाे ।
ज’वरजस्ती गरिसकेपछि सपनालाइ याे कुरा बाहिर कसैलाइ पनि नभन्न रामचन्द्रले ड’र देखाए । ‘म माथी त्यस्ताे कार्य गरेपछि म राे’ए । सरले याे कुरा बाहिर भनेपछि तिम्राे नै बे’इज्जत हुन्छ भन्नुभयाे ।
मैले पनि त्यहि ठानेर कसैलाइ पनि भनिन् ।’विस्तारै रामचन्द्रले सपनालाइ माया देखाउन थाले र सपना पनि रामचन्द्र प्रति आकर्षित भइन् ।
त्यसपछि उनिहरुकाे सधै नै याै न कृयाकलाप हुने गर्याे । रामचन्द्रले घरकी श्रीमती राम्राे नलाग्ने र घरकाे श्रीमतीलाइ छाेडेर सपनाकाे उमेर पुगेपछि सपनालाइ नै बिहे गर्ने आश्वासन दिए ।
र सपना पनि त्यहि कुरामा ढुक्क भएर सधै रामचन्द्रकाे सम्पर्कमा हुन भेट्न र घुम्न जान थालिन् ।
कसरी बाहिरियाे ब ला’त्कारकाे कुरा? पछिल्लाे पटक काेराेनाकाे कारण भएकाे लकडाउनमा रामचन्द्र र सपनाकाे खासै भेट हुन सकेन् । तर उनिहरु बीच पहिले देखिनै शा रिरिक स म्बन्ध भएकाे थियाे ।
त्यहि कारण सपनाकाे पेटमा दुइ महिनाकाे बच्चा बसिसकेछ । त्यसपछि दुवैमा त नाव श्रृजना उत्पन्न भयाे ।
‘म सरलाइ धेरै माया गर्थाे । यदि सरले मलाइ बिहे गरेकाे भए म मु’द्दा दर्ता गर्ने थिइन् । सरले मलाइ बिहे गर्दिन भनेपछि मात्रै मैले उ’जुरी दिएकी हुँ ।
याे कुरामा के गर्ने भन्नेबारे दुवैमा कुराकानी भयाे । अन्तिम निष्कर्षमा सपनाले औ षधि खाएर बच्चा फाल्ने सहमती भयाे ।
असारकाे अन्तिम साता तिर रामचन्द्रले औ षधि ल्याएर बागचाैर बजारकाे सडकमा सुटुक्क सपनाकाे हातमा दिए ।
औष धि कसरी खाने भन्ने बारेमा रामचन्द्रले सबै कुरा सपनालाइ फेसबुककाे म्यासेन्जरमा बताए ।
धादिङ घ’ टना, सडकमै कसरी पु’ रिइन् महिला ? मृ’ तक संगै भेटियो यस्तो प्रमाण, ड्राइभर र ठेकदार फ’ रार(भिडियो)
आज राती १२ बजेदेखि असोज ३० गते सम्म कडा लकडाउनको घोषणा: घर बाहिर निस्किन नपाइने !